देउवाको पाँचौं सत्तारोहणः पूरानैको निरन्तरता कि क्रम भंग हुन्छ ? – Ktm Dainik
प्रदेश १मधेश प्रदेशबागमती प्रदेशगण्डकी प्रदेशलुम्बिनी प्रदेशकर्णाली प्रदेशसुदूरपश्चिम प्रदेश
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विशेष भेला: रवि लामिछानेका दाजुदेखि सुमन सायमीसम्म सहभागी
बलिउड अभिनेता राजपालविरुद्ध ‘धोकाधडी’को उजुरी
माले पोलिट ब्यूरो सदस्य कुमार श्रेष्ठ राप्रपा नेपालमा प्रवेश
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, कुन जिल्लामा कति
माओवादी बिद्यार्थी संगठन फुट्यो, पवन कार्कीको नेतृत्वमा आयोजक समिति
घर–घरमा चन्दा उठाउँदै हिँड्ने दुई जना पक्राउ
पहिलो पटक पूजासँग अनमोलको जोडी
# स्थानीय चुनाव २०७९
# नेपाल आयल निगम
देउवाको पाँचौं सत्तारोहणः पूरानैको निरन्तरता कि क्रम भंग हुन्छ ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
देउवाको पाँचौं सत्तारोहणः पूरानैको निरन्तरता कि क्रम भंग हुन्छ ?
बुधवार, असार ३० २०७८
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । मंगलबार अबेर साँझ उनले पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सपथ लिए ।
४१ महिनाअघि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै बाहिरिएका देउवा फेरि ओलीलाई नै विस्थापित गर्दै सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् ।
पहिलो पटक २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा २६ वर्षपछि पाँचौ पटक पुनः मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बनेका हुन् । २०५२ मा पहिलो पटक झण्डै डेढ वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
. राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दुई घण्टासम्म के-के भयो कुराकानी ?
. तनावमुक्त हुन र स्वस्थ्य शरीरका लागि योगको ठूलो महत्व छ : प्रम देउवा
. अमेरिका भ्रमणको औपचारिक तय भएपछि जानकारी गराउँछु : प्रम देउवा
. प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्ध गर्न नौं कम्युनिस्ट घटकको माग
. मौन अवधि सुरु हुन केही घण्टा बाँकी छँदा देउवाले मागे मत
२०५२ पछि उनी ७ साउन २०५८ मा प्रधानमन्त्री बने । २०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्त गरेपछि बाहिरिए । २० जेठ २०६१ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा २३ जेठ २०७४ मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । तर, निर्वाचन गर्न नसकेको भन्दै अक्षम घोषणा गरेर अपदस्त गरे ।
०७४ मा माओवादीको समर्थनमा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले पाँचौ पटक पनि देउवा माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुराको असिग्राममा जन्मेका (२००३) देउवा २०१७ सालको राजनीतिक घटनाक्रमपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका हुन् । २०२८ सालमा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति बनेका उनी पटक–पटक गरी १० वर्षभन्दा बढी जेल परे ।
२०४८ सालमा कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका देउवा ०४८ मै कांग्रेस नेतृत्वको बहुमत सरकारका गृहमन्त्री बने । ०५९ सालमा कांग्रेस फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन गरेका उनले राजाको कदमविरुद्ध आन्दोलन बढ्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसबीच एकता गरे ।
६ दशकदेखि कांग्रेसको अनवरत राजनीतिमा सक्रिय देउवा ०७२ फागुनमा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति बनेका हुन् । देउवा यस्ता भाग्यमानी नेता हुन, जो २०४८ सालदेखि लगातार संसदीय निर्वाचन जित्दै आएका छन् ।
पहिलो गाँसमै ढुंगा !
यसअघि चार पटक सत्ताको सिँढी(कार्यकारी) चढेका देउवालाई सम्भवतः सबैभन्दा बढी यस पटक चुनौती छ । मंगलबार सपत लिँदै उनले पहिलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दा शीतलनिवासले संविधानको धारासमेत उल्लेख गरेन ।
जसमा भनिएको थियो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको २०७८–३–२८ को फैसलाबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’ तर, अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम नियुक्ति गरिएको पत्र दिएपछि उनले सपत लिन मानेनन् । राष्ट्रपति कार्यालय सपथ सच्याउन तयार भएन । त्यही कारण ६ बजे हुने भनिएको सपथ साढे ८ बजे मात्रै लिए । राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेपछि मात्र बेलुका ८ः२५ मा सपथ भयो ।
सपथपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् । औपचारिक शिष्टता पनि पूरा नगरी राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् । समारोहमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी भएनन् । यो देउवालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा जस्तै भयो ।
यसले थप संकेत पनि गर्छ । आगामी दनिमा राष्ट्रपतिबाट उनलाई असहयोग हुनेछ । यसअघि प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीले गरेको निर्णय जसरी रातारात सदर हुन्थे त्यो सम्भवतः अब रोकिने छ । देउवाले गरेको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा लामो समय अड्किन सक्छन् । मंगलबारको सपत समारोहमा देखिएका दृष्यले यही संकेत गर्छ ।
देउवाले राष्ट्रपतिको असहयोग मात्रै होइन अन्य थुप्रै च्नौतीको सामना गर्नुपर्ने छ । उनलाई पहिलो र सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वासको मत लिनु हुनेछ । यसअघिको दाबीका आधारमा सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
गठबन्धनलाई कायम राख्दै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु देउवालाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । एमालेका २६ सांसदसहित माओवादी केन्द्रसमेतका दलहरूको समर्थनमा बहुमतसहित जेठ ७ गते देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए ।
संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्न नसके प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।
संसदको गणित अहिले पनि क्लियर छ । विपक्षी गठबन्धनमा सामेल एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले फ्लो क्रस नगरे उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून छ । एमाले विवाद साम्य भई पार्टी एकढिक्का भए देउवाका पक्षमा बहुमत पुग्न कठिन छ ।
कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपा (भट्टराई–यादव पक्ष)को १२ मतले मात्र बहुमत पुग्दैन । देउवाले या महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहित जसपाको सिंगो पार्टीको समर्थन जुटाउनुपर्छ या त एमालेको नेपाल–खनाल खेमाका सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ ।
जबकि नेपाल समूह विपक्षी गठबन्धनबाट पनि बाहिरिसकेको छ । नेपाल समूहले देउवालाई विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
यो भयो सत्ता संकट । सत्ता संकटसँगै स्वास्थ्य संकटको पनि सामना गर्नुपर्ने छ । कोभिड संक्रमण केही कम भएर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको भए पनि खतरा टरेको छैन । सबै नागरिकलाई खोपको व्इववस्था गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो ।
थला परेको अर्थतन्त्रलाई जनतामा आशाका किरण जगाउनु पर्ने दायित्व सरकारको कांधमा छ । यति गर्न नसकेको अवस्थामा यसअघिका सरकारले गर्न नसकेका कामको अपजस पनि उनले लिनुपर्नेछ । स्वास्थ्य संकटसँगै संवैधानिक संकटउन्मुख कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेववारी पनि देउवाको काँधमै छ । भदौमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
धेरै अपेक्षा छैनन् !
चार पटक टेस्टेड प्रधानमन्त्री देउवासँग बास्तवमा आम मानिसका धेरै अपेक्षा छैनन् । यसअघि उनका चार कार्यकालमा कुने चमत्कारिक काम भएका जनताले महसुश गरेका छैनन् । कुनै चमत्कारिक काम सरकारले गरोस् भन्ने आम अपेक्षा अहिले पनि छैन ।
त्यो अपेक्षा आम मान्छेले देउवासँग राख्दैनन् । ओलीको स्वेच्छाचारी शासनबाट आजित नागरिकले ओलीको बहिर्गमनपछि रहात महसुश गरेको हुनपर्छ ।
कांग्रेस महाधिवेशन सन्निकट छ । यस्तो अवस्थमा पार्टीभित्रै इतर समूह पनि उनका सामू चुनौती बनेर आउने छ । सभापतिकोसमेत दाबेदार देउवालाई आफ्नै पार्टीका नेतालाई मिलाउन समस्या हुनेछ ।
विपक्षी गठबन्धन कायम गरेर उनले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन सके देउवा सरकारको पहिलो ठूलो सफलता हुनेछ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने पनि सम्भवतः उनकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्नेछ ।
चुनावी सरकार भए पनि मंगलबार साँझ उनले गरेको पहिलो निर्णयअनुसार चैतभित्रै सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न सके अर्को सफलता हुनेछ । त्यसपछि उनको काँधमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउने हुनेछ । तोकिएकै समयमा सफलतापूर्वक निर्वाचन गराउन सकेमात्रै पनि उनको सरकार सफल हुनेछ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, भदौ २८ २०७८ २०:३६:३७
काकाबाट बलात्कृत युवती भन्छिन् : “मलाई न्याय दिलाउन मद्दत गर्नुहोस्”
छालामा के कारणले हुन्छ एलर्जी? लापरवाही गरेमा ज्यान जान सक्ने जोखिम
१२ वर्षीया छात्रामाथि स्कुलका बस चालकद्वारा करणी प्रयास
विदाई हुँदै गर्दा झाँक्रीको आँखाभरी टिलपिल आँसु (तस्विरहरू)
राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ मन्त्रीसहितको सूची
हामीले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न सक्दैनौ: बाध्य भएर पाँचदलीय गठबन्धन बनाएका हौँ
चोक-चोकमा बसेर ‘पठाओ’ भन्ने सँग सावधान, सेवासुविधा पाउन अनलाइन राइड नै गरौँ
देउवा सरकारमा आएपछि, पेट्रोलमा ७१ रुपैयाँ, डिजेल/ मट्टितेलमा ८१ र ग्यासँमा ३७५ रुपैयाँको मूल्यवृद्धि
झापामा पाहुना गएकी बालिकालाई ‘अपहरण’ गरेर बलात्कार
झापामा एकल महिलासमेत रहेकी शिक्षिकामाथि प्रधानाध्यापकको यौन दुर्व्यवहार
अनुसा बनिन् पद्मकन्या क्याम्पसको ‘मिस फ्रेसर’, बलात्कार रोक्न भूमिका खेल्ने सामूहिक प्रतिवद्धता
यसकारण कान्तिपुर टिभीविरुद्ध मेरो सङ्घर्ष !
पीडित पुरुषको नाममा…
चर्चामा अधिकारी : भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि दिए स्थान
‘महिलालाई आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्नका लागि आर्थिक रूपले सक्षम हुन जरुरी छ’ : बबिता बस्नेत
रोटरी क्लब अफ सैबु भैसेपाटीको अध्यक्षमा न्यौपाने
पोखरा महानगरले तोक्यो खुर्सानीदेखि धानसम्मको बिक्री मूल्य
२५० बोरा अफिमसहित कन्टेनर नियन्त्रणमा
पाँच वर्षकी नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्ने किशोर पक्राउ
सुवास नेम्वाङ र डा. सूर्य सुवेदी स्वर्ण सम्मानबाट सम्मानित (फोटोफिचर)
गिट्टीमा भविष्य खोज्दै मुगुका बालबालिका
स्थानिय तह निर्वाचन २०७९
स्थानीय निर्वाचनमा वडाअध्यक्ष : नौ जना गोलाप्रथाबाट छानिए, ४७ जना एक भोटले हार्दा ३५ जना दुई मतले हारे
नेतृत्वमा महिला : नौ जना उपबाट बढुवा, चार दोहोरिँदा तीन नयाँ अनुहार
प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षमा दोहोरिएका १,६७७ जनाको नालीबेली
दलित महिला नै नभेटिएका १२३ वडाको नालीबेली
नेपाली कांग्रेस : स्थानीय चुनावको चिरफार
मूल्यवृद्धिको चपेटाबाट हट्न बैकल्पिक प्रयोगलाइ महत्व दिने कि !
असार १० २०७९
राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भिर खेलवाड : अमेरिकी सेनासँगको एसपीपी साझेदारी
प्रा. डा ईन्दु आचार्य
असार २ २०७९
लुम्बिनी बदलिँदो छ, बढ्न थाले पर्यटक
जेठ २९ २०७९
अहिलेको आयातित अर्थव्यवस्थामा चिन्ता धेरै, आशा थोरै
डा. उत्तम खनाल (अर्थ राजनीतिक विश्लेषक)
जेठ १५ २०७९
“बाँच्न गाह्रो भयो भन्दै” अस्ताइन् गायिका दिलमाया !
यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, बाढी र पहिरोका कारण आज यी सडक छन् अवरुद्ध
१४ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एक महिलासहित दुई जना पक्राउ
नेपालमै पहिलोपटक द क्लिफमा स्काइ ग्लाइडिङ सञ्चालनमा, कति छ त शुल्क ?
महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान
FNJ Election 2077
बलात्कार विरुद्ध ७ दिने अभियान
IWD दिवस सप्ताह
अंक समाचार (News in Digit)